Nhau - Foton AUV Nhare dzeMishonga Dzakasvika muSyria yeKushandisa
Foton AUV Nhare dzekurapa Maseru Akasvika muSyria yeKushandisa
Vakuru kubva kuChina neSyria vakapinda mhemberero yekutambidza
Sechikamu chekutanga chezvinhu zvekubatsira kubva kuChina Red Cross kuenda kuSyria, Foton AUV maseru ekurapa emahara uye maamburenzi anonyatsoratidza kuzvipira kwekambani kuita mamwe mabasa ehukama uye kupa rudo nekutarisira kune avo vanhu vanoshaya.
Mushure memhemberero yekugamuchidza, Wang Qinglei, injinjini yehunyanzvi kubva kuFoton AUV akagamuchira rumbidzo nekupa hurukuro huru pakushandisa nekuchengetedza maseru ekurapa emahara nemaamburenzi kuvashandi vanobva kuSyria Arab Red Crescent (SARC).
Wang Qinglei akaratidzira mashandisiro e Photon AUV Medical Care Masero
Kubva muna2008 kusvika 2012, Foton AUV yakapa mamwe maseru ekurapa enhare kune dzimwe nzvimbo dzakatambudzwa nehurombo muXinjiang, Qinghai uye Inner Mongolia, zvichiita kuti zvive nyore kwazvo kune veko kutsvaga kurapwa. Foton AUV kuburikidza nezvayo zvainoita inoita zvakatokura mipiro kurunyararo rwenyika nekusimudzira.
Nhengo dzeSARC dzakatora selfie pamberi peMbon AUV Mobile Medical Cell